हिन्दी फिल्मको सिको गरेर छोराको विहेमा हेलिकप्टर चार्टर्ड « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, मंसिर १७ । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका निवासी जोगी साहले छोराको विवाहमा हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेका छन्। जोगी खाद्यान्न व्यापारी हुन्।
सिम्रौनगढ नगरपालिका–१० देवापुर टेटाका साहले २१ वर्षीय छोरा बिर्जु साहको विवाहका लागि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेका हुन्। बिर्जुको रौतहटको गरुडास्थित जोगिन्द्र साह तेलीकी छोरी सङ्गीता साह तेलीसँग बिहीबार विवाह भएको छ। साह हेलिकप्टर चढेर बेहुलीको घर पुगेका थिए।
हेलिकोप्टरका लागि जोगीले तीन लाख ८० हजार तिरेका छन्। छोराले बिहेमा हेलिकोप्टर चढेर जाने इच्छा देखाएपछि आफूले महंगो भाडा तिरेर भएपनि हेलिकम्पट चार्टर्ड गरेको जोगीले बताए।
‘विवाह भन्ने कुरा जीवनमा एकपटक मात्र गर्ने हो’, जोगीले भने, ‘बेहुलाले नै त्यस्तो इच्छा देखाएपछि पूरा गर्नैप–यो।’ उनले सम्पत्ति यस्तै बेलामा चाहिने र परेको बेलामा खर्च गर्न पछि हट्न नहुने पनि बताए। छोराको बिहेमा हेलिकोप्टर भाडामा ल्याउन पाएकामा आफूलाई खुशी लागेको उनले सुनाए।
हिन्दी फिल्ममा हिरो हेलिकोप्टरमा बसेर दुलहीको घर गएको देखेपछि आफूलाई पनि बिहेमा हेलिकोप्टर चढ्ने इच्छा जागेको बेहुला बिर्जुले बताए। ‘हेलिकोप्टर चढ्ने इच्छा थियो, बिर्जुले भने, ‘बुवाले मेरो इच्छा पूरा गरिदिनुभयो।’छन्।
टोपबहादुर रायमाझीको दाबी : यो देश एमालेले मात्रै बनाउन सक्छ
काठमाडौं, १५ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर
कांग्रेस नेता एनपी सावदको बचाउः “प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउन खोज्नुभएको होइन, तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गराउन चाहनुभएको हो”
काठमाडौं, १५ माघ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एनपी सावदले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री
एमाले नेता डा. भीम रावलको झटारोः “राष्ट्रपतिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न मन लागेको हो ?”
काठमाडौं, १५ माघ । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई स्थानीय तहको
मोरिससविरुद्ध मैदान उत्रिँदै नेपाल, जित्नकै लागि खेलिने कप्तान चेम्जोङको भनाई (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १४ माघ । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले भोलि (शनिबार) मोरिससविरुद्ध खेलिने
एमाले नेताको गर्जनः “गठबन्धनका नेताहरूलाई नेपाली पढ्न आउँछ कि आउँदैन ?”
काठमाडौं, १४ माघ । नेकपा एमालेका नेता कर्णबहादुर थापाले जनविरोधी सत्ता गठबन्धनलाई समयमै स्थानीय निर्वाचन
लुम्बिनी प्रदेशमा फागुनभित्रै कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइसक्छौंः मुख्यमन्त्री
काठमाडौं, १४ माघ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशका नागरिकलाई फागुनभित्रै कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइसक्ने
डा. चन्द्र भण्डारीको प्रतिक्रियाः “एउटा गुटको कार्यसम्पादन समिति बनाएर कांग्रेस कहाँ पुग्छ ?”
काठमाडौं, १४ माघ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर
काठमाडौंका प्रजिअ गोविन्दप्रसाद रिजाललाई ऋषि धमलाको प्रश्नः “स्मार्ट लकडाउन आजबाट खुल्छ कि अझै लम्बिन्छ ?”
काठमाडौं, १४ माघ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख